Chelsea oo rajo ka qabta inuu tababare u noqdo Guardiola, xilli uu soo jiitay habka ay u ciyaarto. - Caasimada Online
Home Warar Chelsea oo rajo ka qabta inuu tababare u noqdo Guardiola, xilli uu...
Chelsea oo rajo ka qabta inuu tababare u noqdo Guardiola, xilli uu soo jiitay habka ay u ciyaarto.
Pep Guardiola ayaa doonaya inuu noqdo tababaraha xiga ee Chelsea, macalinkii hore ee Barcelona ayaa qorsheynaya inuu xilkaan kusoo laabto xagaaga soo aadan wuxuuna saaxiibadiis u sheegay inuu mustaqbalkiisu yaalo Stamford Bridge.
Ka dib markii uu ku guuleystay sedax Horyaalka oo La Liga ah iyo laba Koo boo Yurub ah afar sano ee uu joogay Comp Nou, Guardiola, oo 41 jir ah ayaa go’aansaday inuu Qoyskiisa hal sano oo fasax ah kula qaato New York.
Markii uu xaqiijiyey inuu sanad ciyaaraha ka nasanaayo durba Chelsea ayaa dooneysay inay heshiis la gaarto laakiin isaga ayaa diiday.
Roberto Di Matteo ayaana waqtigaas la sugaayey wax ka badan sedax isbuuc ka dib markii uu kooxda ku hugaamiyey guushoodii Champions League ee bishii May ka hor inta aan tababare buuxa kooxda looga dhigin iyadoo laga saxiixay heshiis laba sano ah.
Ka dib guulihii uu kusoo gaaray Spian – isagoo u heeda-daabayey Rikoor 72% inuu guuleystay intii uu Joogay La Liga. Guardiola ayaa waxaa lala xiriirinayaa kooxaha ugu waa weyn Yurub laakiin waxaa la faham san yahay in dooqiisa ay tahay Chelsea oo uu door bidaayo.
Blues ayaa bedeshay hubaashii qaab ciyaareedkeeda iyadoo lasoo saxiixatay Juan Mata, Eden Hazard iyo Oscar, taas ayaana loo arkayaa midda soo jiidatay Guardiola, waxaana jira cadaadis ah inuu milkiile Roman Abramovich u qadarinaayo inuu galbeedka London sii ahaado waqti dheer.